ज्योतिषी हरिहर अधिकारी फिल्म खेल्दै ! – Everest Dainik – News from Nepal
ज्योतिषी हरिहर अधिकारी फिल्म खेल्दै !
ज्योतिष पेशाबाट प्रसिद्धी कमाएका ज्योतिषी हरिहर अधिकारी अब ‘शुभलभ’ फिल्मबाट डेब्यू गर्ने भएका छन् । प्रदिपकुमार उदयको प्रस्तुतीमा बुद्ध इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा तयार हुने फिल्ममा २०१७ की मिस टिन कृष्टिन पौडेलसँग हरिहर पर्दामा देखिने छन् ।
हरिहर स्वयमले लेखेको कथामा बन्न लागेको फिल्मलाई सन्तोषबाबु लोहनीले निर्देशन गर्नेछन् । पटकथा भने अभिमन्यू निरबीले तयार पारेका छन् । भदौ १५ देखि छायांकन हुने फिल्म काठमाडौंसहित पोखरा, इलाम, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प क्षेत्रमा खिचिने छ भने एक गीत भने दुबई र थाइल्याण्डमा खिचिने भएको छ ।
फिल्मको मुहुर्त साइतहरु ज्योतिषी डा।सुनील सिटौलाले साइत जुराइदिएका हुन् । कृष्टिन पौडेलसँगै साथमा डा।सूर्या थापा र कार्यकारी निर्माता प्रदिपकुमार उदय पनि अथितिको भूमिकामा रहनेछन् ।
रामेश्वर थापाको छायांकन रहने फिल्मको संगीत अर्जुन पोखरेलले गर्नेछन भने अन्जु पन्त र सुगम पोखरेलका दुई रहने छ । फिल्ममा राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, रवीद्र झा, प्रदीप बाँस्तोलालगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहने छ । धर्मराज सुवेदीको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्ममा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी र रोशन भट्टराईको द्वन्द्व निर्देशन रहने छ ।
ट्याग्स: Nepali Film